लडाकूको ह्याङ्ग–ओभर छाडेर निष्पक्ष भूमिका खेल्न सभामुख घर्तीलाई युवा संघको चेतावनी, संसद् चलाउन नआए सुभाष नेम्वाङ्बाट सिक्न अनुरोध
राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा ओली सरकारकै निरन्तरता युगको माग हो
| 2016-07-17 Published
निर्माण सञ्चार, यक्ष प्रश्न । ०३६ सालको पुस्ता सहित गन्ने हो भने पनि हामी युवाहरुले परिवर्तनका पनि ३ चरण त भोगिसक्यौं भन्दै युवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारी भन्छन् ०४७ पछिको लोकतन्त्र काँग्रेसीहरुको ‘डेमोक्रेसी’ले सिद्ध्यायो, (काँग्रेसभित्र रहेका पूर्णबहादुर खड्का जस्ता राष्ट्रप्रेमीहरुलाई लाञ्छना लगाउने अभिप्राय छैन, बरु सम्मान नै छ), माओवादी द्वन्द्व त नियोजित रुपमै त्यो बेलाको उपलब्धि हरण गर्न जन्माइएको समयान्तरले पुष्टि गरिसकेको उनको तर्का छ । ‘चाहे विद्रोहमा गएका विप्लव हुन् या नयाँ शक्तिमा उभिएका मुमाराम खनालहरु किन नहुन्, या वर्षमान पुन हुन् कि मणि थापाहरुले रियलाइजेसन के गरेनन् भने- अबको परिवर्तन राष्ट्रवादी सबै शक्तिहरुले संस्थागत गर्दै नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपालको भावी खाका अहिले नै कोर्नु पर्ने ठाउँमा, कुनै जमानामा स्वाधिनताका लागि ‘बंकर युद्ध’ गर्नेहरु नै कथित बन्दै पो गएका हुन् कि’ उनको चिन्ता छ । भन्छन्— ‘कथित जनयुद्धताका बोक्ने गरेको सपना पनि बोक्न छाडिसकेका हुन् कि मित्रहरुले’ ? पहारी यो पुस्ता जो जहाँ भएपनि फेरि एकपटक नेपाल र नेपाली भएर सोच्न आग्रह गर्छन् । ओली सरकारबाट माओवादीको समर्थन फिर्ताबारे उनले ‘नियोजित र रिमोट बाटै सञ्चालित’ बताइरहँदा ‘९ महिनैका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने सोच प्रचण्डका पछाडि आफै आएको नभई कसैले पलाइदिएको हो’ भन्छन् । निर्माण सञ्चारको समसामयिक छलफलमा बोल्दै पहारीले जनप्रतिनिधिहरुको संसदलाई ‘रण–मैदान’ बनाउने सोचले अघि बढिरहेका सभामुख घर्तीलाई समेत भने, ‘महामहिम घर्तीज्यू, आफू बस्ने सरकारी सभा भवन त युद्धपोतकहरु बसाउने गुफा होइनन्, मर्यादा भन्ने कुरा आउँदैन भने पूर्व सभामुखहरुबाट सिक्नुस्, रणमैदान बन्नबाट जोगाउनुस्’ भन्दै सभामुखलाई पहिलेको लाडाका ह्यांगओभरबाट मुक्त भई निष्पक्ष स्पिकर बन्न सुझएका छन् । पढौं उनीसँगको छलफलको सारसंक्षेप—
ओली सरकारबाट माओवादी बहिर्गमनबारे तपाईको धारणा के छ ?
धारणा त बनाउनै पर्याे नै । अहिलेको गठबन्धन किन र कसका लागि कसरी बनेको रहेछ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ । सडकबाट आम साधारण र स्वतन्त्र युवाहरुले, वृद्ध बा–आमाहरुले समेत भारतीय योजनामा यो गठबन्धन बनेको प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् ।
ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकदेखि विभिन्न हाइड्रो र ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट र नदीका डाइभर्सन, हाइवेहरु नेपालीले नै बनाउने, विदेशीहरुलाई नदिने भनेपछि त्यसको बदला लिनेहरुले ओली सरकार गिराउने खेल गरेको
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम काली, तराईमा समेत राष्ट्रवादी शक्तिमाथि प्रहार गरिएको रुपमा माओवादी–काँग्रेस गठबन्धनबारे बोलिरहेका छन् ।
मधेसी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुले समेत आफ्नो क्षेत्रमा युगौं कहिलै नआएको विकास र बजेट ओली सरकारले ल्याएको भन्दै अब बन्ने भनिएको सरकारी गठबन्धनले विकास नै रोकिदिने हो कि भन्ने ठुलो डर पैदा भएको बताई रहेका छन, जनकपुरदेखि धरान इटहरीसम्म खबरदारी जुलुस निक्लिसकेको अवस्था छ ।
देशका निर्माण व्यवसायीहरुले ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकदेखि विभिन्न हाइड्रो र ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्ट र नदीका डाइभर्सन, हाइवेहरु नेपालीले नै बनाउने, विदेशीहरुलाई नदिने भनेपछि त्यसको बदला लिनेहरुले ओली सरकार गिराउने खेल गरेको बताइसकेको अवस्था छ ।
अब भन्नोस् हिजो जन्मेरा बोली फुटेको बच्चादेखि एसएलसी दिएर कलेज छिरेका युवा–युवतीसम्म र देशभक्त कर्मचारीदेखि सेना–पोलिस त के विदेशमा रहेका युवाहरुले समेत ओली सरकारले स्वदेशमै अब अवसरहरुको बहार ल्याउने भो भनी खुसी व्यक्त गरिरहेको लोकप्रिय सरकारमाथि एकाएक किन षडयन्त्र हुन्छ भन्नोस् त ?
पहिलो मनमोहन सरकार किन ढालियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नै यो सरकार विरुद्ध बनेको कित्ताबान्दीले पुष्टि गरेको छ । त्यो भन्दा पनि नेमकिपा अध्यक्ष विजुक्छेले भनेजस्तै चीनका राष्ट्रपति समेत आएर अब नेपालको विकासमा भारतको एकाधिकार तोड्न सहयोग गर्ने भए भने पछि चीनको उपस्थितिले विश्वमै भारतको नाक काटिने त भो ।
त्यसैले वर्तमान ओली सरकार विरुद्ध षडयन्त्र र प्रहार भएको हो भन्नेमा अब पनि दुई मत होला र ?
सरकार फेरिने कुरालाई लिएर किन यत्रो होहल्ला गर्नु नि ? यो त स्वाभाविक हैन र ?
कसरी हुन्छ स्वाभाविक ? गएको बहुदलीय व्यवस्थामा यही रोगले गर्दा देशलाई क्यानसर नै भो भनेर अब सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ल्याइएको भन्दै लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना गरिएको हैन ?
अनि संविधानले नै २०७४ माघ ७ सम्मका लागि स्थानीय निकायदेखि प्रदेशहरुको निर्वाचनसम्मको अवधिलाई संक्रमणकालीन अवधि भन्दै अर्काे सरकारको परिकल्पना नगरेको अहिलेको अवस्था छ । बनेका सरकारहरु पनि स्थायी हुन्, सरकार फेर्ने खेलोमेलोले देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई असर नपारोस् भनी सरकार बनेको ६ महिना अघि अविश्वास प्रस्ताव नै पेस गर्न नपाउने प्रावधान संविधानमा किन राखिएको ? भन्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि नै हैन र ?
मलाई देउवा र प्रचण्डजीलाई सोध्न मन छ, संविधान बनाउने तपाईहरु नै हैन ? संविधान बनाएर प्रयोगमा नआउँदै यसको मूल मर्म धुजाधुजा पारेर रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रयास आजैदेखि किन गर्नु हुन्छ ? लाज लाग्नु पर्ने हैन र ?
जनताका अगाडि हिजोका दिनमा चुनावी घोषणा पत्रमा उनीहरुले के कबोल गरेका थिए, के यही हो स्थयी सरकार र देशलाई उन्नति दिने भनेको ? देशको खास परिस्थितिमा मिलेर सरकार चलाउने त एमालेको प्रस्ताव नै थियो त ।
३ निर्वाचनका लागि ३ दलको आलोपालो सरकारको प्रस्ताव जब स्वीकार गरिएन तब त्यही नै शंका छ, ९—९ महिने प्रधानमन्त्री बन्ने नाउँमा किन यो सरकार विरुद्ध यो षडयन्त्र गरियो ?
दालमे कुछ काला हे भनेको त यही हो नि !
तपाईको मतलब यो गठबन्धन पछाडि विदेशी ‘प्रभु’हरुकै इसारा भन्ने हो त ?
अवश्य नै हो ।
कसरी पुष्टि गर्नसक्नु हुन्छ कि माओवादी–काँग्रेस गठबन्धन विदेशी इसारामै बनेको हो भनेर ? जबकि भारतले नेपालको समसामयिक परिस्थितिमा आफ्नो हात नरहेको बताइसकेको छ त ?
शत्रुले जे बोल्छ त्यही गर्छ भन्ने कुनै शत्रुशास्त्रमा लेखिएको कुरा हो र ? यद्यपि भारत हाम्रो छिमेकी मित्र नै हो । उसमाथि लाञ्छना लगाउने मेरो अभिप्राय छैन । तर मानिसहरुले लाञ्चना नलगाउने किसिमको भारतको व्यवहार रहँदै आएको छ त नेपालमाथि भन्ने पनि त प्रश्न छ नि ।
यो सरकार विरुद्ध जहाँसम्म रिमोट कन्ट्रलबाट प्रहार गरिएको भन्ने छ, हन्ड्रेड पर्सेन्ट सही छ । नत्र माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको भनिएको दिनै होटेल द्वारिकाजमा भारतीय महामहिम राजदूत रञ्जित रायले भोज दिदै नाँच्नु पर्याे किन ?
'बल्ल मलाई ठुलो राहात’ भयो रे रञ्जित रेलाई । भनेपछि नेपालमा राष्ट्रवादी शक्तिहरुको उपस्थिति भारतका लागि कति पीडाको विषय बन्दोरहेछ भन्ने कुरा त आफूलाई बामबुद्धिजीवी भन्न चाहनेहरुले अर्ध औपनिवेशिक छ नेपाल, भारतको उपनिवेशको चँगुलबाट मुक्त हुनु पर्छ चै भन्न नछाड्ने, माओवादी जस्तो पार्टीलाई भारतको इसारामा नाचिरहँदा रोक्न पनि नचाहनेहरुले अहिले किन रमिता हरिरहेका छन् ?
म त चित खाएको छु ।
माओवादी नेता नारायणकाजी र काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलहरुले त थाहै नदिइ सुटुक्क यस्तो सम्झौता गरेको भन्दै अध्यक्ष र सभापतिलाई आक्रोस पोखेको हेर्दा त तपाईले भनेको सही ठहर्छ ।
त्यही त, दाल मे कुछ काला भनेको । नत्र आफ्नै दलभित्र लुकाइने कुनै पनि कुराका पछाडि केही न केही त हुन्छ नि । त्यसैले यो गठबन्धन के हो भन्नेबारे माओवादी भित्र नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नु भएछ, व्यक्तिलाई त फाइदा होला, तर राष्ट्रलाई त धोखा नै भयो भनेर ।
नारायणकाजीले त राष्ट्रिय मुद्दामा सबै बाम र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकै ठाउँ हुनु पर्छ अहिले पनि भनिरहेका छन् । प्रचण्डसँग विमति राखिरहेका छन् । यता माओवादी काँग्रेस गठबन्धनको अर्काे पटाक्षेप पनि बाहिर आएकै छ, सभापति शेरबहादुर देउवाजीले समेत ढाकछोप गरेरै यो काम पुरा गरेका रहेछन् ।
त्यो भन्दा पनि खतरनाक कुरा त यो गठबन्धनका लागि अहोरात्र भित्री रुपमा लामो समयदेखि लागेका भनिएका ‘दूत’ अमरेस सिंहले उद्घाटन गरेको सत्य झनै डरलाग्दो छ ।
खैर अपशकुन नसोचौं, यतिका कुरा बाहिर आएपछि पनि यो गठबन्धन नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र समृद्धिका विरुद्ध भारतीय 'हिडेन इन्ट्रेस्ट' पुरा गर्न बनाइएको हो भन्नेमा कुनै शंका बाकी छ र ?
यदि म सही छु भने, मेरो विश्लेषणले के भन्छ भने, भारतले यो षडयन्त्र केपी ओली विरुद्ध गरेको होइन, खासमा नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्थायित्व र समृद्धि ऊ चाहँदैन ।
त्यसैले उसले आफ्नो इसाराको सरकार वा कठपुतली बाहेकले देशको नेतृत्व लिएको देखिसहदैन भन्ने उसकै व्यवहारले सिद्ध गरिसकेको तथ्य हो । यसलाई पुष्टि गर्न भारतीय रवैयालाई हेरेरै भन्नु पर्ने हुन्छ । उसका ३ वा ४ मोडेल छन् जसभित्र ऊ आफ्ना स–साना छिमेकीमाथि शासन गर्न चाहन्छ । पहिलो हो— ब्रिटिस उपनिवेशबाट आफू मुक्त भएको केही समयमै सिक्मिलाई भारतमा विलय गराउनु । दोस्रो मोडेल छ— फिजी जस्तो स्वतन्त्र देशमा गएर नवउपनिवेश नै चलायो । त्यस्तै तेस्रो मोडेल हो— भुटान । भुटानजस्तै राजनीति र अर्थतन्त्र कब्जा गरी आफू नियन्त्रित देश बनाइराख्नु । चौथो छ— श्रीलंका र नेपालको मोडेल । केही समयअघि तामिल टाइगरहरु जन्माएर श्रीलंकाको समृद्धि र स्थायित्व हरण गर्न थालेको भारत असफल भयो । नेपालमा माओवादी नामक विद्रोहीलाई जन्माएर दरबारको सत्यानास गरायो । यस्तै यस्तै गिजोल्दै जाने र छिमेकी देशहरुलाई कित आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कित गर या मरको अवस्थामा पुर्याउने हो भारतले । केही भएन भने पाकिस्तानको जस्तो शत्रुता कायम राखिरहने, मित्रता चै गाँस्दै नगास्ने । यसैले थाह हुन्छ भारतले प्रचण्ड र देउवाजीलाई माया गरेर सत्तासीन गराउन लागेको हो र ? विचरा उहाँहरु त कठपुतली हुन् ।
चीनको सहयोगले अब नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने भो भन्ने उसको डाह कायमै थियो । जुन हिजैदेखि कायमै थियो । यसैकारण दरबारको शक्ति राजाहरुसँग भारतले दुश्मनी मोलेको थाहै छ । अहिले पनि ऊ त्यसै गर्छ ।
भलै ओली वा अरु कोही महान नेता देश र जनताको पक्षमा यसरी उभिन्छन् भने भारतले यस्तै गोटी चाल्दै आएकाले हामी यसलाई खुलेर विरोध गरिरहेका छौं ।
सडकमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनको युवा जुलुसबारे स्वतन्त्र नभई तपाईहरु कै अर्काे रुप हो भन्ने टिकाटिप्णी छ त ?
ए बाबा, एउटा सचेत नागरिकले आफ्नो देशको बारेमा सही भए समर्थन र गलत भए गलत छ भन्दै सच्याउनका लागि आवाज उठाउन पाउँदैन ? के यो लोकतन्त्र हैन ? के कसैलाई पनि यहाँ बोल्न दिइदैन ? मन परेको कुरामा समर्थन र मन नपरेको कुरामा आफ्नो विचार दर्ज गर्न पनि काँग्रेसका मठाधीश र माओवादीका लडाकूहरुको मञ्जुरीनामा लिएर मात्रै बोल्नु पर्ने रहेछ अब ?
व्यक्ति हिरो छ, नाकमुख राम्रो छ, ओलीको बोली तगडा छ भनेर सडक समर्थनमा निस्केको होइन, हजारौं नेता छन् तर देशका लागि उभिएको त एउटै मात्र रहेछ भन्ने जानेर ओलीका लागि होइन आफ्नो भोलिका लागि सडकमा निस्को हो नि ।
आजको युवा काम र व्यवहारलाई हेरेर समर्थन वा विमर्थन गर्ने हैसियत राख्छ । उसको चेतनालाई थुन्ने हिम्मत गर्नेहरुलाई युवाहरुले नै दिन्छन् जवाफ ।
दिन दाहाडै यो देशमा बिना कारण सरकार समेत ढालिन्छ भने यो देशको नागरिक भएका नाताले उसले किन ढालिदै छ सरकार ? भनी सोध्न किन नपाउने ?
नत्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक भनी संविधानमा किन लेखिएको हो ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्नको हुनुको अर्थ के हो ? त्यस अनुसार जाने हो भने त चुनावमा गएर जनताले दिएको म्यान्डेट लिएर सरकार बनाउने हो नि । दुई चारटाको झुन्ड मिल्ने अनि लोकप्रिय काम गरिरहेको सरकारालई गलहत्याउने र मनलागी गर्ने, त्यो पनि विदेशीको इसारामा, सार्वभौम जनताको सम्मान गरिएको हो ? त्यसका लागि चुनावमा जाउँ न त ।
जनताको म्यान्डेट नलिई जसो मन लागो त्यसै गरेर विकासका लागि अहोरात्र खटिरहेको एउटा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री ढाल्दै अर्काे दुईचारजनाको झुण्ड आउँदै, बलजफती गर्दै सरकार फेर्दै जाने अराजक कुरा हैन ? यसले जनतालाई 'सार्वभौम' भएको तथ्य स्वीकार गर्छ ?
आजको २१ औं शताब्दीको सूचना र प्रविधिले सुसज्जित सचेत युवाहरुको मुखमा रौं कोचेर तँ चुप लागेर बस् भन्न खोजको हो ?
२० औं वर्षसम्म विकासको नाउँमा ‘वि’ पनि सुरु नभएको देशमा ओली सरकारले त विकासको मूल फुटाउने सपना त देख्यो नि ! भारतीय नाकाबन्दीले चेत खुलेको आजको युवा पंक्तिले भारतले नै गर्दा नेपाल उभो नलागेको रहेक छ भनी जानेपछि त्यही भारतको हैकमवाद विरुद्ध लडिरहेको सरकार विरुद्ध षडयन्त्र भएपछि आजको युवा मुख थुनेर बस्न सक्छ ? अनि प्रतिरोधका लागि कसैले सडकमा आउ भन्नु पर्छ आजको जनतलाई ?
टर्कीमा हिजो मात्रै सेनाले जबरजस्ती गर्दै जननिर्वाचित सरकार विरुद्ध जुन हर्कत गर्याे, जनताले तोपको परवाह नगरी बन्दुकको बलमा सत्ता हत्याउन खोज्नेलाई परास्त गरेनन् ?
के भन्ने खोजेको ? आफ्नो विरुद्ध अन्याय भयो भने बोल्न नपाइने लोकतन्त्र आएको हो नेपालमा अब ?
आजको युवाले व्यक्ति हिरो छ, नाकमुख राम्रो छ, ओलीको बोली तगडा छ भनेर सडक समर्थनमा निस्केको होइन, हजारौं नेता छन् तर देशका लागि उभिएको त एउटै मात्र रहेछ भन्ने जानेर ओलीका लागि होइन आफ्नो भोलिका लागि सडकमा निस्को हो नि ।
हामी त सामाजिक अभियन्ताका भएका नाताले गएर हेर्न र चासो राख्न पनि नपाउने रहेछौं होगि ? कसको अनुमति लिनु पर्ने हो भने भैगयो त ।
त्यसो त सभामुख ओनसरी घर्तीज्यूले पनि ‘अब कुनै पनि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइन्न, मात्र अविश्वासको ‘बिजनेस’ बाहेक भनेर थुनछेक गरेको बलजफती गरेको हैन र ?
सही कुरा भन्नु भो । हो नै त्यही ।
अब के गर्नु हुन्छ त तपाईहरु ?
यदि सभामुखले सभामुख जस्तै संसद् भनेको गरिमामय जनप्रतिनिधिहरुको जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो भनी सोही अनुसार पदीय मर्यादा पालना गर्ने, तटस्थ व्यवहार नदेखाउने हो भने त पक्कै पनि घातक बाटोमा मुलुक जान्छ । उनले त जानीजानी मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजना चाहेको देखिन्छ ।
यदि यस्तै हो भने यसभित्र दालमे कुछ काला रहेछ भन्ने कुरा झनै पुष्टि हुने छ । तैपनि एक नागरिकका हैसियतले पनि म महामहिम सभामुखज्यूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि सभामुखज्यू आफ्नो मार्यादाको सिमा उल्लंघन गर्याे भने समुद्रले पनि सुनामी निम्त्याउँछ भन्ने कुरा हेक्का छ ?
यदि आउँदैन भने पूर्व सभामुख नेम्वाङसित सिक्नोस्, तर मार्यादित ढंगले संसद सञ्चालन गर्नाेस् भन्नेबाहेक हामीसँग के छ र । सदनमा पेलेपछि त सडकमा आउँछन् जनता ।
प्रस्तुति— नवराज खतिवडा ।
२ साउन, ०७३